Opera VPN, yemahara uye isina muganho VPN sevhisi ye iPhone yedu IPhone nhau
Kubva pane imwe nguva kusvika pachikamu ichi izvo zvinodiwa nevashandisi kuti vade kuchengetedza zvakavanzika zvavo zvakachengetedzwa sezvinobvira, dzakakurisa masevhisi eVPN pamwe nemabhurawuza akaita seTor, ayo anotibvumidza kufamba neIPs kubva kune dzimwe nyika. Opera iri kugadzirira vhezheni yayo yebrowser yedesktop inosanganisa VPN, asi parizvino inongowanikwa kune vanogadzira.
Asi zvakare, vakomana vanobva kuOpera vachangobva kuvhura Opera VPN, chishandiso chitsva icho inotibvumidza kumisikidza sevhisi yeVPN muUnited States, Canada, Germany, Singapore neNetherlands, dzimwe nzvimbo dzichawedzerwa munguva pfupi. Asi chii chaizvo chiri chitsva nezve ichi chishandiso chitsva ndechekuti zvese sevhisi uye chishandiso zvacho mahara.
Mazuva ese mamirioni avanhu, kubva kuvadzidzi kuenda kuvashandi, vanoona kuti avo avanofarira masevhisi akadai seSpapchat, Facebook, Instagram, kutenderera mavhidhiyo mapuratifomu ... akavharirwa kuburikidza neWiFi kubatana kwavari kushandisa, zvekuti hazvigoneke kuwana iwo masevhisi. Kutenda kuchishandiswa chitsva cheOpera VPN isu tichabatsira vanhu ava kuputsa zvipingaidzo uye nekukwanisa kunakidzwa neinternet kubva chero kwavari.
Imwe yemabhenefiti akakosha atinopihwa nemasevhisi eVPN isimba pinda chero zvemukati pasina chero nzvimbo yekumisikidzwa. Chokwadi pane imwe nhambo iwe unenge waedza kuwana vhidhiyo yeYouTube uye hauna kukwanisa nekuti haigone kuridzwa kunze kweUnited States. Zvakanaka, neiyi sevhisi yeVPN iyo kukamurwa hakuchina.
Kana tangoteedzera nekugadzirisa mashandisiro, maitiro akareruka, nhoroondo ichaiswa pane yedu kifaa. Pese patinoshandisa sevhisi iyi, tichaona kuti mazwi VPN anoonekwa sei pamusoro pechinhu chedu, padyo nechiratidzo cheWiFi.
Sezvo kana izvo zvisina kukwana, iko kunyorera iyo inotipawo kushambadzira uye kuki kuvhara kuitira kuti tikwanise kufamba kuburikidza chero peji rewebhu pasina kusiya chero trace uye kuti webhu iri mubvunzo haina chero dhata nezve izvo isu zvatiri kutsvaga, chimwe chinhu chekuti kana tichienzanisa mitengo yakanaka, kunyanya paAmazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Opera VPN, yemahara uye isina muganho VPN sevhisi ye iPhone yedu
Dambarefu idzva raDrake rinotengesa miriyoni imwe yemakopi muvhiki